Nhau - The Predominant Category Of Iron Art
Iyo Inonyanya Kukosha Chikamu cheIron Art
Iron art, kazhinji kutaura, inyanzvi inoshandura rough objets yakagadzirwa nesimbi (inodaidzwa kuti ironware) kuita art objets. Nekudaro, art yesimbi haina kusiyana kubva kune yakajairika ironware.
Pfungwa yeiron art semakore mazhinji apfuura, kubvira Iron Age, vanhu vakatanga kugadzira zvigadzirwa zvesimbi. Vamwe vanhu vanovimba nehunyanzvi uhu kuti vawane momey kuti vararame. Tinoti vapfuri vesimbi. Avo vanoshanda nesimbi, kana vapfuri vesimbi, vanogadzira simbi yakajairika kuita zvinhu zvakasiyana-siyana, semapani esimbi, zvipunu zvesimbi uye mapanga omukicheni anoshandiswa muupenyu hwedu hwezuva nezuva kubika pamwe chete nezvigero nezvipikiri zvinoshandiswa muupenyu hwezuva nezuva. Kunyange minondo namapfumo anoshandiswa muhondo anogona kukwanisa kufanana nesimbi. Kunyangwe paine musiyano mudiki pakati pe ironware ne iron art, zvigadzirwa zviri pamusoro hazvigone kunzi iron art.
Gare gare, nekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, zvigadzirwa zvesimbi zvinogara zvichivandudzwa nekukwenenzverwa. Havasi ivo chete vanonyanya kushanda, ivo vakaitawo fambiro mberi huru muchitarisiko. Inogona kutonzi ibasa rehunyanzvi kunova kuzvarwa kwesimbi art. Kurongeka kwezvigadzirwa zvesimbi art kunobva pane zvakabikwa uye nzira dzekugadzirisa.
Iron art inogona kupatsanurwa muzvikamu zvitatu: ruva rakatsetseka simbi art, simbi yakakandwa art uye yakagadzirwa simbi art.
Iyo imwechete caracteristic yeflat flower iron art ingori yekuti inogadzirwa nemaoko. Nezve hunyanzvi hwesimbi, tinotsanangura uye tinodaidza kuti chero zvigadzirwa zvesimbi zvinogadzirwa mumhando yakaderera-kabhoni simbi uye patani yayo inogadzirwa zvachose nemichina nzira - yakaumbwa nenyundo. Nezve iyo cast iron art, iyo huru caracteristic ndiyo zvinhu. Chinhu chikuru chesimbi yakakandwa art igrey color iron material. Cast iron art inogona kuve nemapateni akawanda uye maumbirwo uye anonyanya kushandiswa pakushongedza.
Ndechipi chikamu chikuru pakati pezvikamu zvitatu zviri pamusoro zvesimbi art?
Inonyanya kushandiswa isimbi yakagadzirwa. Zvigadzirwa zvesimbi zvinogadzirwa zvinowanzo gadzirwa ne mold, saka chitarisiko chakashata asi nemutengo unonzwisisika kunyangwe zviri nyore kuwana tsvina.
The kugadzirwa kwesimbi
Kugadzirwa kwesimbi kunoda matanho mashoma. Danho rekutanga rekugadzirwa kwesimbi rinowanzo sanganisira kuunganidza zvigadzirwa uye kuzvitarisa. Zvinhu zvikuru zvichashandiswa zvinosanganisira flat steel, square steel, welding tsvimbo nependi. Nyatsoteerera paunenge uchiunganidza zvigadzirwa; inofanira kutevedzera humwe hunhu hwepasi rose. Mushure mekunge zvigadzirwa zvagadzirwa, maitiro anogona kutanga kutevera mamwe matanho. Nyanzvi yekugadzira inogona kudhirowa sample ichishandisa komputa kwete nekudhirowa kuri nyore pabepa sezvo mazhinji emafekitari atora modhi yekombuta yemamodhi echigadzirwa chesimbi. Mushure mekugadzira iyo software modhi, mugadziri anogona kushandura iyo mbishi kuita yekupedzisira iron chigadzirwa art nekutevera pateni mukombuta template modhi. Kana iyo modhi yechero art yesimbi iine zvikamu zvakasiyana, inobatanidzwa newelding, yobva yapihwa kune vashandi vane hunyanzvi kuti varapwe pamusoro uye vozopendirwa nependi yepamusoro-giredhi anti-ngura. Zvechokwadi, chigadzirwa chakapedzwa chinofanira kupiwa kune inspector kuti chiongororwe.
Iron art inyanzvi asiwo inyanzvi. Kuvandudzwa kweiron art kwakatevera kuenderera mberi kwesainzi uye tekinoroji. Zvigadzirwa zvesimbi zvakagadzirwa nevanhu mumazuva ekutanga zvaingoshanda, asi hunyanzvi hwesimbi hunogadzirwa nevanhu vemazuva ano hunogona kuve hwakakodzera sehunyanzvi hwekushongedza. Naizvozvo, tarisiro yekusimudzira yesimbi art ichiri ine tarisiro uye mukuenderera mberi.
Nguva yekutumira: Nov-29-2020
mwenje wakatungamirira, mwenje wezuva, Metal Garden Decoration, Modern Garden Art, mwenje wekushongedza, Garden Decor Metal,